कसरी कर्नस्टार्चको पिठोबाट कपाल कडा बनाउने बेजिया
कसरी कर्नस्टार्चको पिठोबाट कपाललाई सिधा बनाउने
Toñy Torres | 22/07/2021 20:00 | सुन्दरता
यदि तपाइँ रसायनिक र तातो उपकरणहरू प्रयोग नगरी तपाइँको कपाल कडा बनाउन प्राकृतिक तरिका खोज्दै हुनुहुन्छ भने, माईजेनाको पीठो तपाईको लागि हो। एक कपाल मास्क को रूपमा प्रयोग गर्न सजिलो, सस्तो र उत्तम उत्पादन पाउन सजिलो। यसको धेरै गुणहरूको कारण, यो कपालको स्वास्थ्यको लागि वास्तवमै लाभदायक छ। अरु माझ, मकैको पिठो वा कोर्नस्टार्चमा फलाम, भिटामिन र खनिज हुन्छ.
ती सबै, पौष्टिक पदार्थहरू र एन्टिऑक्सिडन्टहरू जसले केशिका संरचना सुधार गर्न अनुमति दिन्छ यदि यसलाई बाह्य रूपमा प्रयोग गरिएको छ। त्यो हो, जब तपाइँ तपाइँको कपालमा कोर्नमेल लागू गर्नुहुन्छ, यो यो खाना को सबै पौष्टिक गुणहरु बाट लाभ। के कारणले भित्रबाट कपाल पोषण गर्न मद्दत गर्दछ, नरम, थप प्रतिरोधी बन्छ, फ्रिज हटाउँछ र कंघीलाई सजिलो बनाउँछ।
1 कपाल स्टार्च मास्क कपाल सीधा गर्नका लागि
1.1 कर्नस्टार्च र मह मास्क कपाललाई सीधा गर्नका लागि
1.2 मैले कति पटक मास्क लागू गर्नुपर्दछ?
कपाल स्टार्च मास्क कपाल सीधा गर्नका लागि
तपाईंले प्राप्त गर्न चाहानु हुने परिणाममा निर्भर गर्दै मकईको पीठो वा कर्नस्टार्क विभिन्न सामग्रीहरूको साथ प्रयोग गर्न सकिन्छ। यदि तपाईं ब्लीचिंग वा तातो उपकरणहरूले क्षतिग्रस्त कपाललाई सुधार गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ भने तपाईंले कर्नरस्टार्कलाई अन्य सामग्रीसँग मिलाउनु पर्छ। देखि, यद्यपि कोर्नस्टार्च एक्लै frizz लाई कम गर्न मद्दत गर्दछ, आफैंको सम्पत्ती छैन कपाल सीधा.
यो लक्ष्य प्राप्त गर्न हामीले अन्य अवयवहरूसँग मिलेर कर्नस्टार्चमा आधारित मास्क तयार गर्नुपर्नेछ। त्यहाँ धेरै विकल्पहरू छन् र सबै राम्रा परिणामहरूका साथ, यद्यपि भिन्नताका साथ कपालको प्रकारमा निर्भर गर्दछ। यदि तपाईंसँग धेरै घुमाउरो माने छ भने, कर्नस्टार्चले तपाईंलाई कपाल कपाल गर्न नरम र सजिलो बनाउन मद्दत गर्दछ। यद्यपि, एक खराब परिभाषित कर्लको साथ एक मानेमा, नतीजा अधिक धेरै शानदार हुनेछ।
सामग्रीको नोट लिनुहोस् जुन तपाईंलाई मह महमाको मास्कको लागि चाहिन्छ। प्राकृतिक पोषक तत्वहरूको संयोजन जुन तपाईं एक मजबूत, नरम, चमकदार माने र तपाईं के खोजिरहनु भएको थियो, एक प्राकृतिक सिधा कपाल प्राप्त गर्नुहुनेछ।
कर्नस्टार्च र मह मास्क कपाललाई सीधा गर्नका लागि
यो कपाल स्ट्रेटिing्ग मास्क तयार गर्न तपाईंलाई निम्न सामग्रीहरूको आवश्यक पर्दछ। राम्रो नोट लिनुहोस्, तर यदि तपाईं नरिवल तेल प्राप्त गर्न सक्नुहुन्न भने, तपाईं यसलाई अतिरिक्त कुमारी जैतूनको तेलको लागि प्रतिस्थापन गर्न सक्नुहुनेछ.
२ चम्मच पीठो मकै
Table चम्मच miel
Table चम्मच नरिवल तेल
मास्क तयार गर्न तपाईंले निम्न चरणहरूको पालना गर्नुपर्दछ.
पहिले कर्नस्टार्कलाई चिसो पानीसँग मिसाउनुहोस्अन्यथा यो विघटन हुँदैन।
मिश्रण सासप्यानमा हाल्नुहोस् र कम गर्मीमा ल्याउनुहोस्। तपाईं जेली जस्तो बनावटको साथ टाँस नभएसम्म निरन्तर हलचल गर्नुहोस्।
माइक्रोवेभमा नरिवल तेल तताउनुहोस् केहि सेकेन्डको लागि ताकि यो तरल रहन्छ।
ठूलो कन्टेनरमा, सबै सामग्रीहरू मिक्स गर्नुहोस् जब सम्म तपाईं क्रीमी मास्क पाउनुहुन्न। यो कपालमा यसलाई लागू गर्न सक्षम हुनको लागि स्थिरता हुनै पर्छ।
मास्कलाई न्यानो हुन दिनुहोस् जब तपाईं राम्रो आफ्नो कपाल ब्रश गर्दा।
मिश्रणलाई तपाईको कपालमा लगाउनुहोस्, धुनु बिना नै। सम्पूर्ण माने कभर नगरे सम्म स्ट्रेन्ड द्वारा स्ट्र्यान्ड.
कोर्नस्टार्च र मह मास्क गरौं or० वा minutes० मिनेट को लागी कार्य गर्नुहोस्.
समाप्त गर्न को लागी तातो पानी संग कपाल कुल्ला र सामान्य रूपमा तपाईको कपाल धुनुहोस्।
मैले कति पटक मास्क लागू गर्नुपर्दछ?
यो प्रक्रिया समय-समयमा दोहोर्याउनु महत्त्वपूर्ण छ, त्यसपछी मात्र तपाईं परिणामहरू बुझ्न सक्नुहुनेछ। विशेष गरी यदि तपाइँ बिग्रिएको वा धेरै सुक्खा कपाल छ भने। यो कर्नस्टार्च र मह मास्क लगाउनुहोस् २ र times पटक हप्ताको बीचमा र तपाई नरम, प्रतिरोधात्मक, सहज शैलीको कपालको आनन्द लिनुहुनेछ र वास्तवमा एक अविश्वसनीय चिकनी संग। यदि तपाईं तेल कपाल छ वा टाउको मा flaking बाट पीडित, तपाईं मास्क लागू जब कपाल को जरा पुग्न बेवास्ता।
अन्तिम ट्रिकको रूपमा, यदि तपाईं तातो उपकरणहरू प्रयोग नगरी चमकदार, चिल्लो र नरम माने देखाउन चाहनुहुन्छ भने, वैकल्पिक कर्नस्टार्च र मह मास्कलाई निम्न विकल्पको साथ। Table चम्मच कर्नस्टार्च २ गिलास नरिवलको दुधमा मिक्स गर्नुहोस्। पिठो र गर्मी विघटन जब सम्म तपाईं एक मलाईदार पेस्ट प्राप्त। यदि तपाईंसँग धेरै लामो कपाल छ वा धेरै कपाल छ भने, दुई गुणा रकम।
एक पटक मास्क तयार भएपछि, सुक्खा र राम्रो प्रकारको कपालमा लागू गर्नुहोस्। एक घण्टाको लागी छोड्नुहोस् र न्यानो पानीले पखाल्नुहोस्, सामान्य रूपमा तपाईको कपाल धुनुहोस् र यसलाई सुक्खा दिनुहोस्। यी सबै प्राकृतिक अवयवहरूले कुनै पनि समयमा तयार हुनको लागि शरीर र उत्तम बनावटको साथ, तपाईंलाई एक सुन्दर माने देखाउन मद्दत गर्दछ।
लेखको पूर्ण मार्ग: बेजिया » सुन्दरता » कसरी कर्नस्टार्चको पिठोबाट कपाललाई सिधा बनाउने
गर्मी Stradivarius कि तपाइँ याद गर्नु हुँदैन
सबै स्वादको लागि डेनिम शर्ट